Yoigo ၏ Black Friday ဖြင့်စမတ်ဖုန်းကိုအသစ်တင်ပါ Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာ
ဒီနေ့ငါတို့သိပြီ Yoigo က Black သောကြာနေ့အတွက်ကမ်းလှမ်းသည် ခရီးဆောင်မှတဆင့်အသစ်သောဖောက်သည်ရန်။ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းများအရအတိတ်ကာလကမည်သည့်အချိန်မဆိုပိုကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်း အချို့သောအော်ပရေတာများမှအခါအားလျော်စွာစတင်သောအထူးလျှော့စျေးများကိုအမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားတတ်သည်။
ဤအချိန်တွင် Yoigo ၏ကမ်းလှမ်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုပြုလိမ့်မည်။ ယခုအချိန်တွင်အကျော်ကြားဆုံးသောစမတ်ဖုန်းများ၌အထူးလျှော့စျေးများပေးရန်ကမ်းလှမ်းထားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအနက်ရောင်သောကြာနေ့ဟာ high-end terminals တွေကို ၀ ယ်ချင်သောဖောက်သည်များစွာကိုဆွဲဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။
1 ကြီးမားသော outlay မပါဘဲနောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်းနည်းပညာ။
1.1 Samsung ရဲ့ Galaxy S8
1.2 Samsung ၏ Galaxy Note ကို 8
1.4 Samsung ရဲ့ Galaxy J7
1.5 Huawei က P8 Lite ကို
1.6 BQ X Pro ကို
2 gu Alguien da más?
ကြီးမားသော outlay မပါဘဲနောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်းနည်းပညာ။
ဖောက်သည်များပိုမိုဆွဲဆောင်ရန်အော်ပရေတာ၏သော့သည်လွယ်ကူသည်။ အများဆုံး "ထိပ်တန်း" စမတ်ဖုန်းများ၏စျေးနှုန်းကိုလျှော့ချ နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့ကိုအဆင်ပြေသူတို့ကိုပေးဆောင်ဖို့အဆောက်အ ဦ ကိုဆက်ကပ်။ ပြီးတော့ဒါကိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်နှုန်းထားများကိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေများနှင့်ပေါင်းထည့်ပါမယ်။ များစွာသောသူတို့ကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ Yoigo သည်၎င်းကို Black Friday သဘောတူညီမှုများဖြင့်အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးဖြင့်ယူထားသည်။
Samsung မှနောက်ဆုံးပေါ်ယူရိုငွေကိုမပေးပဲလက်ချောင်းထိပ်များမှ အနည်းဆုံးတော့ကန ဦး အစ၊ Yoigo သည်သင့်အားယခုအချိန်တွင်လူသိအများဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရရှိရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ သူကတစ် ဦး နှင့်အတူကလုပ်ပေးသည် မူရင်းစျေးနှုန်းအတွက်နှစ်ရာနှစ်ဆယ့်ငါးဒေါ်လာလျှော့စျေး။ ကန ဦး "သုည" အခကြေးငွေနှင့်ယူရိုဆယ်ဆယ်အတွက်လစဉ်ငွေပေးချေမှု ၂၄ ခုနှင့်အတူ Galaxy S8 သည်သင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။
၎င်းကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည့်အရာနှင့်ပေါင်းစပ်။ Yoigo သည်သင်မယုံနိုင်လောက်သောစမတ်ဖုန်းကိုခံစားနိုင်စေရန်ပြုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။ မှတ်သားထားရမည်မှာလစဉ်ငွေပေးချေမှု ၂၄ ခုကိုတစ်ကြိမ်ပေးပြီးပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် terminal ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ပေးရမည်ဖြစ်သည် အဆုံးမှာယူရိုတစ်ရာသုံးဆယ်ကိုးပေးဆောင် နောက်ထပ်။ ဒီနောက်ဆုံးငွေပေးချေမှုနဲ့တောင်မှ Galaxy S8 ဟာငါတို့အတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ မင်းရှာနေတာလား
သင်၏ Samsung Galaxy S8 ကိုဤနေရာတွင်ရယူပါ။
မင်း Yoigo ကိုပြောင်းလဲမှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အကြီးမားဆုံးလုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော။ Yoigo ကအိမ်ကိုပြတင်းပေါက်ကနေဖယ်ထုတ်ပြီး Note 8 ဈေးနှုန်းကိုယူရိုလေးရာလျှော့ချလိုက်တယ်။ သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဤအထူးလျှော့စျေးကိုရှာမတွေ့ပါ။ ဒါ့အပြင်သုညယူရို၏ကန ဦး ငွေပေးချေမှုကနေစတင်။ နှင့်အတူ တစ်လလျှင်နှစ်ဆယ်ငါးယူနစ်နှစ်ဆလေးအရစ်ကျ.
အကယ်၍ သင်သည်ဤစမတ်ဖုန်း "monster" ကိုရွေးချယ်ပြီးအရောင်းအဝယ်ပြီးဆုံးသွားလျှင်၎င်းကိုပြုလုပ်ရမည် ကိုးဆယ်ယူရို၏နောက်ဆုံးငွေပေးချေ။ ကမ်းလှမ်းချက်ကိုမရစေတဲ့အရာတစ်ခုခုကကောင်းမှုကိုဆုံးရှုံးသည် သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးနှုန်းကိုရွေးချယ်ပြီးနည်းလမ်းများစွာဖြင့်“ "ရာမ” စမတ်ဖုန်းကိုခံစားပါ။
Samsung Galaxy Note 8 ကို Yoigo ဖြင့်ရယူပါ။
သင် "အမှောင်ဘက်" သို့သွားရန်စဉ်းစားဖူးသလော အကယ်လို့သင်ဟာအိုင်ဖုန်းတစ်ခုဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိချင်ရင် Yoigo ကဒဏ္myာရီဆန်ဆန်တီထွင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးပေးပါတယ်။ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အိုင်ဖုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းထိပ်တွင်ထူးခြားသောအထူးလျှော့စျေးဖြင့်ရရှိသည်။ တစ် ဦး နှင့်အတူပိတ်ပင်တားဆီးမှုကူးခေါင်း နှစ်ရာယူရိုလျှော့စျေး.
သင့်မှာ iPhone ပေးချေမှုရှိနိုင်တယ် နှစ်ဆယ်လေးယူရို၏လစဉ်အရစ်ကျ။ ၎င်းကိုသင်ရွေးချယ်သောနှုန်းသို့ထပ်ထည့်ပါလိမ့်မည်။ ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပါ တစ်ရာကိုးဆယ်ကိုးယူနစ်၏နောက်ဆုံးငွေပေးချေမှုသို့မဟုတ်ကိရိယာကိုပြန်ပို့ပါ။ သင်ရှာနိုင်သောအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် iPhone X ။ အတွေ့အကြုံကိုသင်စမ်းချင်ပါသလား။
ရှင်းနေသည်မှာ၎င်းသည် Samsung မှစွမ်းအားအပြည့်ဆုံးသောရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်သည် သင်အမြဲချိတ်ဆက်နိုင်အောင်အလုံအလောက်အရည်ပျော်ပစ္စည်းတစ်ခု။ အလွန်ကြီးစွာသောကုမ္ပဏီ၏ကျောထောက်နောက်ခံရှိသည်သောစမတ်ဖုန်း။ Yoigo ကအဲဒါကိုငါတို့နဲ့ကမ်းလှမ်းတယ် ယူရိုသုံးရာလျှော့စျေး.
အခမဲ့! ဟုတ်ကဲ့၊ Yoigo က Samsung Galaxy S7 ကိုပေးတယ် သူတို့နှင့်အတူသယ်ဆောင်သွားလုပ်နေဘို့။ ပထမသုံးလမှခြောက်လအတွင်းအထူးနှုန်းထားလျှော့စျေးများဖြင့်၎င်းတို့နှုန်းထားကိုရွေးပါ။ လက်မှတ်တွေနဲ့လစဉ်ကြေးမရှိဘဲစမတ်ဖုန်းကိုနှစ်သက်ပါ။ ဘယ်သူပိုပေးသလဲ။
Yoigo နှင့်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောသင်၏အခမဲ့ Samsung Galaxy J7 တွင်ဒီမှာပါ။
Huawei က P8 Lite ကို
စမတ်ဖုန်းမြေပုံပေါ်တွင် Huawei ကိုစုစည်းနိုင်ခဲ့သည့်ဖုန်းများအနက်တစ်ခု။ ဒီဖုန်းရဲ့အောင်မြင်မှုရလာတယ် ရောင်းရန်ကျော်သုံးဗားရှင်းအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြု။ Yoigo မှပေးသောကြီးသောအရာများကိုစွမ်းဆောင်နိုင်သောစမတ်ဖုန်း။ ဟုတ်တယ်၊ နောက်အခမဲ့ဖုန်းတစ်လုံး။
ဘယ်သူမှသင့်ကိုဘာမှမပေးခင်ကတည်းကဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ Yoigo သည်၎င်း၏ဖောက်သည်အသစ်ကိုအသစ်ပြန်လုပ်ရန်အကြီးအကျယ်လောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Yoigo ဖြင့်သင်၏နံပါတ်ကိုသယ်ဆောင်သွားနိုင်ခြင်းနှင့်သင်ရရှိနိူင်သည့်နှုန်းထားများကိုရွေးချယ်ခြင်း အခမဲ့ Huawei P8 Lite ။ ဒီဖုန်းကသင့်ကိုလုံးလုံးလျားလျားကုန်ကျမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ယူရိုနှစ်ရာလျှော့စျေး
Yoigo သို့ပြောင်းခြင်းဖြင့် Huawei P8 Lite အခမဲ့ဖြစ်သည်။
BQ X Pro ကို
အမျိုးသားထုတ်ကုန်ကိုစမ်းချင်ပါသလား စပိန်စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီ BQ သည်ဤသီးသန့် Yoigo မြှင့်တင်ရေးတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်ခု၏ Pro ဗားရှင်း။ နီးပါးအရာအားလုံးအတွက်၎င်း၏အရင်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်တစ် ဦး ကဖုန်း။ အောင်မြင်မှုများစွာရရှိသည့်စုစည်းထားသောအခြေစိုက်စခန်းမှစတင်သည်။
သင်က၎င်း၏ရူပကြိုက်နှစ်သက်လျှင်, Yoigo ကနှင့်အတူကစတင်သည် ယူရိုသုံးရာသုံးဆယ်ကမ်းလှမ်းမှုကို ပိတ်ထားသည် ဒီလုပ်ဖို့စီမံကြောင်းလျှော့စျေး BQ X Pro သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ မှန်ပါတယ်၊ Yoigo က ၀ င်ငွေ၊ လစဉ်ကြေးသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးအခကြေးငွေများမပါ ၀ င်သောအခြားစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သည်။ Yoigo ကိုသာရွေးချယ်ပြီးသင့်ကိုအများဆုံးကမ်းလှမ်းသောကုမ္ပဏီသို့ပြောင်းပါ။
Yoigo မှသင့် BQ X Pro ကိုအခမဲ့ရွေးချယ်ပါ။
gu Alguien da más?
Yoigo တွင်သူတို့သည်သောကြာနေ့က Black ကိုအလေးအနက်ထားကြသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကအိမ်ကိုသာမန်ထဲကအထူးလျှော့စျေးတွေပေးပြီးပြတင်းပေါက်ကနေပစ်ချလိုက်တယ်။ နှစ်ရာသုံးရာအထိယူရို ၄၀၀ အထိလျှော့စျေး တရားဝင်စျေးနှုန်းအပေါ်။ သင်ဘယ်နေရာမှာမှမတွေ့ဖူးတဲ့အထူးလျှော့စျေးများပါတဲ့အမြင့်ဆုံးဖုန်းများ။
ပြီးတော့ဆံပင်ကောက်ကောက်မှ, စမတ်ဖုန်းသုံးလုံးလုံးဝအခမဲ့! ဖုန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကသင့်ကိုစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပေးခဲ့တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ သယ်ဆောင်ရလွယ်သောဖုန်းသုံးလုံးကိုအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်သောဖောက်သည်များအား Yoigo ကထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယူရိုကိုမပေးဘဲသင်၏စမတ်ဖုန်းကိုရယူပါ။ သို့မဟုတ်သင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာအကွာအဝေး၏ထိပ်ကိုရယူပါ။ မင်း Yoigo ကိုသွားမလား တက်ကန့်သတ်ယူနစ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာ » သင်၏စမတ်ဖုန်းကို Yoigo ၏ Black Friday ဖြင့်အသစ်တင်ပါ
Android ကောလဟာလများ ဟုသူကပြောသည်
Android Rumors ကိုပြန်လည်ပြောပြပါ
OnePlus3နှင့် 3T တို့သည် Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်သည်